Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0612 lah
Fandresena voaomana ho antsika
Alahady 04 Nov.
Tsy hananan’ny Kristianina velively ny fanantenana ny fandresena ny herin’ny ratsy raha tsy efa nomanina ho azy ireo izany. Tao amin’ny lesontsika tamin’ny herinandro lasa, dia azontsika amin’izay fa azon’i Kristy tamin’ny alalan’ny Fahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin’ny maty ireo karazana “herin’” ny ratsy rehetra mpanohitra an’Andriamanitra. Raha ny marina, dia efa nanafoana ny herin’izy ireo ny fanalana sarona ny momba azy sy ny fanesorana ny fiadiany. Ny fandresena ireo “hery” ireo no manomana sahady ny fandresen’ny Kristianina.
Diniho tsara ny Efes. 1:18-22. Mivavaka i Paoly mba hahiratan’ny mason’ny sain’ireo Kristianina tao Efesôsy. Inona no notanterahin’i Kristy ho antsika araka ny voalazan’i Paoly? Ahoana no fahazoantsika ireo teny ireo eo amin’ny tontolon-kevitry ny ady lehibe ifanaovan’ny tsara sy ny ratsy? Inona no ampanantenaina antsika eto? Ahoana no hampiharantsika ireo teny fikasana ireo eo amin’ny fanandramantsika manokana?
Mivavaka i Paoly mba hisy fahiratana vaovao sy lalina eo amin’ny Kristianina. Rehefa mitranga izany, dia ho heniky ny fanantenana kristianina ny fiainan’izy ireo. Ho fantany ny tombontsoany amin’ny maha-mpandovan’Andriamanitra azy ary ho fantany amin’ny alalan’ny fanandramana ny herin’Andriamanitra eo amin’ny fiainany. Hery lehibe tahaka ilay nananganana an’i Jesôsy tamin’ny maty ihany izany hery izany.
Mariho manokana ny Efes. 1:20-22. Inona no azontsika takina avy amin’ireo teny fikasana ireo, ho an’ny tenantsika sy ho an’ny tolona ataontsika amin’ny hery izay mahery vaika lavitra noho isika?
Vokatry ny fanomboana an’i Kristy teo amin’ny hazo fijaliana sy ny fitsanganany tamin’ny maty, dia manjary miasa eo ambany saokany avokoa ny zavatra rehetra, ao anatin’izany ireo fanapahana sy fanjakana. Azontsika tsirairay avy atao tokoa araka izany ny mandresy izay rehetra mitady hamotika ny fanahintsika.
Vakio ireo andininy nomena hodinihintsika anio. Inona no azonao raisina avy amin’izy ireo eo anatrehin’izay mety ho tolona atrehanao amin’izao fotoana izao? Saintsaino izay voalaza ao sy izay ampanantenaina antsika ao amin’i Kristy. Ahoana no hahatonga an’io ho tena zava-misy marina tokoa eo amin’ny fanandramantsika fa tsy teôlôjia fotsiny ihany?
Copyright © 2018 Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana. All rights reserved.